Guinea: Gudiga doorashada ayaa shaaciyay taariikhda cusub ee doorashooyinka sharci dajinta - JeuneAfrique.com - WAA IN LA SAMEEYAA
ACCUEIL » SIYAASADDA Guinea: Komishanka doorashada ayaa ku dhawaaqay taariikhda cusub ee doorashooyinka sharci dejinta - JeuneAfrique.com
Madaxweynaha guddiga doorashada ee Guinea wuxuu ku dhawaaqay Sabtiga 9 November in doorashada baarlamaanka ay dhici doonto Febraayo 16 2020.
Bishii Sebtember, Amadou Salif Kébé, madaxweynaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka (Ceni), soo jeedisay taariikhda 28 Diseembar. Laakiin mucaaradka iyo wakiiladooda komishanka ayaa markaa dhalleeceeyay mashruuc aan macquul aheyn oo u adeegaya, sida laga soo xigtay iyada, mashruucu wuxuu amaahday Madaxweyne Alpha Condé si uu ugu maamulo dhulkiisa gaarka ah ee 2020.
Markan, si kastaba ha noqotee, jadwalka cusub ee ay soo saareen guddiga doorashada ayaa waxaa si wada jir ah u meel mariyey wakiiladiisa 16 ee goob joog ka ahaa (17), ayaa lagu yiri war saxaafadeedka dambe.
Baaqaani wuxuu dhacaa inta Guinea waxay ku jirtaa qalalaasaha dilaaga ah Maaddaama ay wada kulmeen xisbiyada mucaaradka, ururada shaqaalaha iyo bulshada rayidka ahi waxay ku baaqeen banaanbaxyo lagu horjoogsanayo muddada suurtagalka ah ee saddexaad ee Madaxweyne Conde.
Muddada loo kordhiyay baarlamaanka
Baarlamaanka hadda jira wuxuu xafiiska la wareegay Janaayo 2014 muddo shan sano ah. Doorashooyinku waxay ahaayeen inay soo afjaraan 2018 ama ay bilaabaan 2019, laakiin uma dhicin arrimo siyaasadeed iyo farsamo darteed. Bishii Janaayo, Alpha Condé wuxuu kordhiyay waqtiga baarlamaanka ilaa la soo xirayo sharci-dejin cusub taariikhda aan la sheegin.
Madaxweynaha komishanka Amadou Salif Kebe ayaa sheegay in Guinea ay heshay agabkii doorashada ee ay sheegatay hanti dhowrka doorashada. Liisaska, dib-u-eegistooda ayaa bilaabatay oo jawaabihiinu "waa mid aad u deggan", ayuu yiri iyada oo la raacayo qoraalka wax ka qabashadiisa.
Guddigu "waxay cusbooneysiinayaan rabitaankooda ku aaddan abaabul doorasho lagu kalsoonaan karo, loo dhan yahay oo hufan. Caqabada ayaa ah mid muhiim ah, laakiin waxaan ku qanacsanahay inay tahay mid ay gaari karaan dadka madaxbanaan ee Guinea, ayuu yidhi.
Dawlada Hoose iyo Sharci dejinta 2020: Paul Biya wuxuu isugu yeeray cod bixiyaha bisha Feberaayo 09